106 Drops DJ efa novokarina - NYE Countdown ho an'i Djs, Vjs, Nightclubs 2021
Home / Drops DJ (Bundled Paks) / 106 Drops DJ efa novokarina
Te hanao azy ireo SCREAM ve izy ireo? TSARA REHETRA REHETRA 2020!
PLUS SIX BONUS tsy misy vola!
Hatsarao ny fampisehoana miaraka amin'ireto DJ mahavariana azonao ampiasaina amin'ny NYE ireto ihany koa ny ambin'ny taona! Manampy fanampiny amin'ny fampisehoana ataonao izy ireo ary hahatonga anao hisarika ny vahoaka. Aza miverimberina very hevitra intsony. Nampiasain'ny DJ an-jatony manerantany isan-taona. Ataovy ity EPIC New Year Eve ity miaraka amin'ny kitapo efa novokarina efa vita 106.
TRANO FANDAHORANAANA (Henoy eto ambany)
Ho an'ny 15 fantsom-pahalalana ambony amin'ny 2020 KITIHO ETO
106 ny habetsaky ny Drops efa novokariny mialoha
SKU: 100PreProducedDrops2020 Sokajy: Drops DJ (Bundled Paks)
*** (Mihainoa ny lalana ... ary tsindrio ny bokotra "sarety" hividianana ilay lalana tsirairay) ***
Hatsarao ny fampisehoana miaraka amin'ireto DJ mahavariana azonao ampiasaina amin'ny NYE ireto ihany koa ny ambin'ny taona! Manampy fanampiny amin'ny fampisehoana ataonao izy ireo ary hahatonga anao hiseho amin'ny vahoaka. Aza miverimberina very hevitra intsony. TSARA REHETRA REHETRA 2020!
Ataovy ny EPIC amin'ny Taom-baovao amin'ity taom-panamboarana 106 efa novokarina efa niasa tamin'ny tantara ity.